Mateu 8 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
Mashoko Akanaka Akanyorwa naMateu 8:1-34
Munhu ane maperembudzi anoporeswa (1-4)
Mukuru weuto anoratidza kutenda (5-13)
Jesu anoporesa vanhu vakawanda muKapenaume (14-17)
Nzira yekutevera nayo Jesu (18-22)
Jesu anodzikamisa dutu (23-27)
Jesu anodzingira madhimoni munguruve (28-34)
8 Paakaburuka mugomo, vanhu vazhinji vakamutevera. 2 Uye mumwe murume aiva nemaperembudzi akabva auya ndokumupfugamira, achiti: “Ishe, kana muchida henyu, munogona kundichenesa.”+ 3 Saka akatambanudza ruoko rwake, akamubata, achiti: “Ndinoda! Cheneswa.”+ Akabva angocheneswa pamaperembudzi ake.+ 4 Jesu akabva ati kwaari: “Uve nechokwadi kuti hauudze mumwe munhu,+ asi enda unozviratidza kumupristi,+ wopa chipo chakarayirwa naMozisi,+ kuti zvive uchapupu kwavari.” 5 Paakapinda muKapenaume, mumwe mukuru weuto akauya kwaari akamuteterera+ 6 achiti: “Ishe, muranda wangu akaoma mutezo uye akarara mumba, achirwadziwa zvikuru.” 7 Iye akati kwaari: “Kana ndasvika ikoko ndichamurapa.” 8 Mukuru weuto akapindura achiti: “Ishe, handina kukodzera kuti mupinde mumba mangu, asi ingotaurai shoko muranda wangu obva aporeswa. 9 Nekuti neniwo ndiri pasi pevamwe, ndiine varwi vari pasi pangu, uye ndinoti kune uyu, ‘Enda!’ uye anoenda, uye kune mumwe, ‘Uya!’ uye anouya, uye kumuranda wangu, ‘Ita izvi!’ uye anozviita.” 10 Jesu paakanzwa izvozvo akashamiswa akati kune vaya vakanga vachimutevera: “Ndinokuudzai chokwadi, handisati ndambowana munhu ane kutenda kwakakura kudai muIsraeri.+ 11 Asi ndinokuudzai kuti vazhinji vanobva kumabvazuva nekumavirira vachauya vogara patafura naAbrahamu naIsaka naJakobho muUmambo hwekudenga,+ 12 vanakomana veUmambo vachikandwa kunze murima. Imomo ndimo mavachachema vari vachirumanisa mazino.”+ 13 Jesu akabva ati kumukuru wacho weuto: “Enda zvako. Waratidza kuti une kutenda, saka ngazviitike kwauri.”+ Muranda wacho akabva aporeswa panguva iyoyo chaiyo.+ 14 Uye Jesu paakapinda mumba maPetro, akaona amai vemudzimai wake+ varere vachirwara nefivha.+ 15 Saka akavabata ruoko,+ fivha ikapera, uye vakasimuka vakatanga kumugadzirira zvekudya. 16 Asi ava manheru, vanhu vakauya kwaari nevanhu vazhinji vakanga vakagarwa nemadhimoni; uye akadzinga mweya yacho neshoko, uye akarapa vese vairwara, 17 kuti azadzise zvakataurwa nekumuprofita Isaya kuti: “Iye akatora zvirwere zvedu, uye akatakura matenda edu.”+ 18 Jesu paakaona kuti akanga apoteredzwa nevanhu vazhinji, akataura kuti vabvepo vayambuke mhiri.+ 19 Uye mumwe munyori akauya kwaari akati: “Mudzidzisi, ndichakuteverai kwese kwamunoenda.”+ 20 Asi Jesu akati kwaari: “Makava ane mwena yaanogara uye shiri dzekudenga dzine matendere, asi Mwanakomana wemunhu haana pekuisa musoro wake.”+ 21 Mumwe wevadzidzi akabva ati kwaari: “Ishe, ndibvumirei kuti nditange ndaenda kunoviga baba vangu.”+ 22 Jesu akati kwaari: “Ramba uchinditevera, uye rega vakafa vavige vakafa vavo.”+ 23 Uye paakakwira chikepe, vadzidzi vake vakamutevera.+ 24 Dutu guru rakabva ratanga mugungwa, zvekuti chikepe chakanga chava kufukidzwa nemasaisai; asi iye akanga akarara.+ 25 Vakabva vauya kuzomumutsa, vachiti: “Ishe, tiponesei, tava kufa!” 26 Asi iye akati kwavari: “Muri kutyeiko, imi mune kutenda kudiki?”+ Akabva amuka, akatsiura mhepo negungwa, kukabva kwadzikama zvikuru.+ 27 Saka varume vacho vakashamiswa, vakati: “Uyu munhu werudzii? Kunyange mhepo negungwa zvinomuteerera.” 28 Paakasvika mhiri, munharaunda yevaGadhara, varume vaviri vakanga vakagarwa nemadhimoni vakauya kuzosangana naye vachibva kumakuva.*+ Vaityisa kwazvo, zvekuti hapana aishinga kupfuura nemugwagwa iwoyo. 29 Vakabva vatanga kuzhamba vachiti: “Munei nesu imi Mwanakomana waMwari?+ Mauya kuno kuzotirwadzisa+ nguva yacho isati yasvika here?”+ 30 Nechekure nepavaiva, kwaiva neboka renguruve raifudzwa.+ 31 Saka madhimoni acho akatanga kumuteterera, achiti: “Kana mukatidzinga, titumirei muboka renguruve.”+ 32 Iye akabva ati kwaari: “Endai!” Paakangonzarwo akabuda akanopinda munguruve, uye dzese dzakadaro dzakabva dzamhanya nepamawere dzikapinda mugungwa dzikafiramo. 33 Asi vafudzi vacho vakatiza vakapinda muguta, ndokunotaura zvese zvakanga zvaitika, kusanganisira nyaya yevarume vaya vaiva nemadhimoni. 34 Guta rese rakabva rabuda kuzosangana naJesu, uye pavakamuona, vakamuteterera kuti abve munharaunda yavo.+